MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: 2013-09-22
at 9/28/2013 09:55:00 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် နိုင်ငံခြားအရင်းအနှီး လိုအပ်နေတုန်းမှာ တရုတ်ရဲ့  ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ကျဆင်းလာ တာဟာ တိုင်းပြည်အတွက် မကောင်းကြောင်း သုံးသပ် ထားတဲ့ စာတမ်းတစောင် စက်တင်ဘာလ (၁၇) ရက်နေ့ က ထွက်လာပါတယ်။ မြန်မာပြည် ကို သွားရောက်လေ့ လာခဲ့တဲ့ တရုတ်အမျိုးသမီး သုတေသီ (ယွန့်စွန်) ရေးသားပြီး ဝါရှင်တန်မြို့ တော် အခြေစိုက် Stimson Center က ထုတ်တဲ့စာတမ်းပါ။ Chinese Investment in Myanmar: What Lies Ahead ဆိုတဲ့ စာတမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်စဉ် (ဓာတ်ပုံ – သာလွန်ဇောင်းထက် / ဧရာဝတီ)
ယခင် စစ်အစိုးရ၏ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို အသစ် ပြန်လည်ရေးဆွဲရန် တိုင်းရင်းသားများက ကြေညာထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(NLD) ကမူ အခြေခံ ဥပဒေ အသစ် ပြန်လည် ရေးဆွဲ ခြင်း သည် နိုင်ငံရေး တွင် တပ်မတော်ကို ဖိတ်ခေါ် ဆွဲသွင်းရာရောက်သည်ဟု ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်သည်။
at 9/28/2013 09:50:00 PM No comments:
အင်းခါးဂါးကျေးရွာဒေသခံများ၏ အခြေအနေသွားရောက်ကြည့်ရှုရန် ဗျူးဟာမှူးမှ တစ်ညအိပ်ခွင့်ချက်ဖြင့် ကချင်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်အဖွဲ့နှင့် ကြံခိုင်ရေးပါတီများ ထိုကျေးရွာသို့ ယနေ့ စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့သွားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
`ဟိုကဒေသခံတွေကို သွားခေါ်ဖို့သွားတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ အခြေအနေမှန်သိအောင် သွားကြည့်တဲ့သဘောပဲ။ သူတို့ပြန်လာမှ ဒေသခံတွေ အတွက် ဘာဆက်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာ ကိုသိမှာ။´ဟု ပိုတာအိုနှစ်ခြင်းအသင်းတော်မှ သာသာရေးဆရာတစ်ဦးကဆိုသည်။
at 9/27/2013 09:52:00 PM No comments:
at 9/27/2013 09:51:00 PM No comments:
လတ်တလော ကချင်ပြည် နယ်နှင့် ရှမ်းပြည် နယ်မြောက်ပိုင်း ကချင် လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဖွဲ့ KIA တပ်ချ ထားသော နယ်မြေများ တွင် အစိုးရတပ် ဖက်မှ လှုပ်ရှားမှုများ အရှိန်လျော့နည်း လာကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ အစိုးရ တပ်ဖက်မှ လှုပ်ရှားမှုများ ခေတ္တငြိမ်သက်နေ သည်ဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း တပ်ဆုတ် သွားခြင်းမရှိသေးပဲ KIA တပ်ချထား သည့် နေရာအနီးတွင် အသင့်ရှိနေခြင်းဖြစ် သည်ဟု နှစ်ဖက်တင်း မာမှုရှိခဲ့သော ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း တပ်မဟာ (၄)ဖက်မှ တပ်ခွဲမှူး ဇော်ဆိုင်းကပြောသည်။
at 9/27/2013 09:15:00 PM No comments:
at 9/27/2013 09:13:00 PM No comments:
အခုတလော အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး စကား၊ ရင်ကြားစေ့ရေး စတဲ့ အသံတွေ အများကြီး ကြားနေရပါတယ်။ သူ့ခေတ်နဲ့ သူ့ အခါ ကြားရတာမို့ မဆန်းဘူး လို့ပဲ အောက်မေ့နေ လိုက် ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလို ပြောမှုဆိုမှုတွေထဲမှာ စစ်ဖြစ်ရ တဲ့ အကြောင်းရင်းဟာ သုံးမျိုးပဲ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ပြောနည်းမျိုးကို ကြားလိုက် ရပါတယ်။ ပြောကြတာက စစ်မက် ဖြစ်ပွားတယ် ဆိုတာဟာ (၁) လူမျိုးရေး၊ (၂)ဘာသာရေး၊ (၃) ဝါဒရေးဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်း သုံးခုကြောင့် ဖြစ်ပွားတာဖြစ်တယ်။ တခြား အကြောင်းရင်း မရှိဘူး ဆိုတဲ့ အယူအဆ ဖြစ်ပါတယ်။ သဘောတရား တခု တင်လာတဲ့ သဘောလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီအယူအဆ၊ ဒီလို အပြော အဆိုကို အရင်ကလည်း ဖတ်ဖူး၊ ကြားဖူးပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်း များလာတဲ့ သဘော ရှိတဲ့အတွက် ကိုယ့်အမြင်ကိုတော့ ပြောမှပဲ ဆိုပြီး ကီးဘုတ်ကို နှိပ်နေမိပါတယ်။ တချိန်ထဲမှာ ကိုယ်လက်လှမ်း မီတဲ့ စစ်ပွဲတွေ ကိုလည်း ပြန်စဉ်းစား နေမိပါတယ်။
at 9/27/2013 09:07:00 PM No comments:
at 9/27/2013 09:06:00 PM No comments:
ဗမာအစိုးရ စစ်တပ် ခလရ (၂၄၁) သည် စက်တင်ဘာ (၂၅) ရက် ညနေ (၈း၃၀) နာရီအချိန်ခန့်တွင် မန်ဘီကျေး ရွာမှ ဈေးသွားရင်၊ နွားမောင်းလာသော တရုတ် အမျိုးသားတစ်ဦးကို လမ်းတွင် ပစ်သတ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ တရုတ်အမျိုးသား၏ နောက်တွက် လိုက်ပါလာသော အမျိုးသမီး တစ်ဦးကိုလည်း သေနတ်ထိမှန်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ သေနတ် ဒဏ်ရာရရှိသွားသော အမျိုးသမီးကို ဗမာစစ်သားများမှ ခေါ်ဆောင်သွားပြီး၊ သေဆုံးသွားသော တရုတ်အမျိုးသား၏ အလောင်းကို ဒူမွန်း၏ ပြည်သူ့စစ်များက စောင့်နေလျှက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
at 9/27/2013 08:50:00 AM No comments:
တကျော့ပြန်ကချင်ပဋိပက္ခအစ သိလိုသူများ ပြန်ဖတ်နိုင်ရန် ယခင်ကရေးခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးကို ပြန်တင်ထားပါတယ်
at 9/26/2013 07:14:00 PM No comments:
၂၀၁၁၊ နိုဝင်ဘာ၅ရက်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ကချင်ပြည်နယ်...။
at 9/26/2013 07:08:00 PM No comments:
at 9/26/2013 02:09:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ဒီမိုကရေစီပါတီကို တရားဝင်မှတ်ပုံတင် မချပေးသေး
ကချင်ပြည် နယ် ဒီမိုကရေစီ ပါတီ Kachin State Democracy Party (KSDP) ပါတီ သည် တရားဝင်ဖြစ်ရေး အ တွက် နေပြည်တော်ရွေးကောက် ပွဲကော်မရှင် သို့ လျှောက် ထားပြီးနောက် စက်တင်ဘာလ လယ်ပိုင်း တွင် ချပေး မည်ဟု မျှော်လင့် ထားသော် လည်း အကြောင်းပြန်ခြင်း တစုံတရာ မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
နေပြည်တော်ရွေးကောက်ပွဲကော် မရှင် သို့ ပါတီခေါင်းဆောင် များဖြစ်သော ဒေါက်တာ တူးဂျာနှင့် ဦးဘရန်လီ၊ ဦးဇော်ဒွဲတို့ သွားရောက်ကာ ပါတီတရားဝင် မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာ အမြန်ဆုံးရမည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပါတီဦးဆောင်နေသူ ဒေါက်တာတူးဂျာ ကပြောသည်။
at 9/26/2013 11:45:00 AM No comments:
ဒီတပတ် မြန်မာ့ မျက်မှောက်ရေး ရာ ဆွေးနွေးခန်းမှ မြန်မာနိုင်ငံဟာ တိုင်းတပါးရဲ့ သြဇာကိုမခံယူဘဲ ပြည်သူလူထုရဲ့ ဆန္ဒအတိုင်း ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်တာဟာ တိုင်းပြည်အတွက် အန္တရာယ်တစုံတရာ ရှိနိုင်ပါသလား။ တိုင်းပြည်အန္တရာယ်ဖြစ်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကို ကန့်ကွက်တာဟာ တိုင်းပြည်အကျိုးလား၊ ပါတီအကျိုးလား ဆိုတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာ့အရေးကျွမ်းကျင်သူ ပါမောက္ခ David Steinberg နဲ့ ဦးကျော်ဇံသာတို့ ဆွေးနွေးသုံးသပ် တင်ပြထားပါတယ်။
at 9/26/2013 08:54:00 AM No comments:
ဖားကန့်၊ ဆိုင်းတောင် ဒေသများမှ ကျောက်အ၀င် မရှိသဖြင့် မန္တလေးကျောက်ဈေးကွက် အေးနေ
ကျောက်မျက်ပြပွဲများ ဆက်တိုက် ကျင်းပအပြီး ဖားကန့်၊ ဆိုင်းတောင် ဒေသများမှလည်း မိုးတွင်းအခါ ကျောက်အ၀င် မရှိသဖြင့် မန္တလေးကျောက်စိမ်း ဈေးကွက် အေးနေကြောင်း သိရသည်။
နေပြည်တော်ပြပွဲ၊ တရုတ်ပြည် ကူမင်းပြပွဲ၊ ထိုင်းတွင် ပြုလုပ်သော ပတ္တမြား၊ ကျောက်မျက်ပြပွဲအပြီး မန္တလေးကျောက်ဝိုင်းသို့ ကျောက်စိမ်းအ၀င် ရှိခဲ့သော်လည်း ကုန်သည်အချို့မှာ ပစ္စည်းအကုန် ထုတ်မရောင်းဘဲ ဈေးမြှင့် ခေါ်ခြင်းများကြောင့် ကျောက်စိမ်း ဈေးမြင့်တက်နေကာ ပစ္စည်းရှားနေကြောင်း သိရသည်။
at 9/26/2013 08:51:00 AM No comments:
at 9/25/2013 07:05:00 PM 1 comment:
တပြည်လုံးအတိုင်းအတာ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးကို အစိုးရအား ကိုယ်တိုင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးစေလို
လက်ရှိ အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းလက်နက် ကိုင်အဖွဲ့ များကြားဖြစ် ပွားနေသော ပဋိပက္ခပြဿနာများ သည် အစိုးရပြော ဆိုနေသော ‘တပြည်လုံး အတိုင်းအတာ အပစ်ခတ် ရပ်စဲရေး’ ကို မိမိအစိုးရ ကိုယ်တိုင်ကြေငြာပြီး လက်တွေ့ဆောင် ရွက်ခြင်း အားဖြင့် ဖြေရှင်း သွားနိုင်မည့် ကိစ္စရပ်ဖြစ်ကြောင်း ကချင် လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးဆွမ်လွတ်ဂမ် (Sumlut Gam) ပြောသည်။
at 9/25/2013 11:05:00 AM No comments:
ကုလအကူညီပေးကားတန်း မြစ်ကြီးနား-လိုင်ဇာကြား မြေပြို၍ လမ်းတွင်ရပ်ထားရ
ကချင်ပြည်နယ် တရုတ်နယ်စပ် လိုင်ဇာမြို့ ပတ်ဝန်းကျင်အနီးရှိ ဒုက္ခသည် စခန်းများကို စက်တင် ဘာလ အတွင်း တတိ ယကြိမ် မြောက် အကူညီပေးရန် မြစ်ကြီးနားမှ ပစ္စည်းများ တင်ဆောင် လာသောသော ကုလအကူညီပေးအဖွဲ့၏ ကားတန်းသည် ဂန်ဒေါင်ယန် (Gangdau Yang)နှင့် အင်ပေါန် (N’Pawn) ကြား မြေပြိုမှုကြောင့် ခရီးစဉ်ကို လမ်းတွင် ခတ္တရပ်ထားရကြောင်း သိရသည်။
at 9/25/2013 11:04:00 AM No comments:
at 9/24/2013 07:05:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် နမ္မတီးတွင် စစ်ကား ဝင်တိုက်၍ ကချင်အဖွားအို နှင့်ကလေးငယ် သေဆုံး
ကချင်ပြည်နယ် နမ္မတီးအခြေစိုက် အမှတ် (၃) စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲရေးဌာနချုပ် (စကခ (၃)) မှ တပ်ကြပ်တစ်ဦး ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီး မောင်းထွက်ပြေးသွားခဲ့သည်။ ကလေးငယ်တစ်ဦး ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးပြီး ကျန်တစ်ဦးမှာ ဆေရုံတွင် သေဆုံးကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
at 9/24/2013 10:39:00 AM No comments:
at 9/24/2013 10:17:00 AM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် အတွင်း ကချင်ကျောင်း သားများနှင့် ကချင်လူငယ် များကို အဓိက ဘိန်းဖြူနှင့် မူးယစ်ဆေး ၀ါးများ ကို ရောင်းချ ရန် ဗမာ စစ်တပ်မှ တာဝန်ပေး ထားခြင်းခံရပြီး လက်တွေ့ရောင်း ချနေသော ဘိန်းရောင်းသူတစ်ဦးကို ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များမှ ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ကေအိုင်အိုအစိုးရ၏ မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီး နှိပ်နင်းရေး လုပ်ဆောင်ချက်အရ ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ (၃) လက်အောင် တပ်ရင်း (၂၇) မှ မျိုးချစ်ရဲဘော်များသည် တာဝန်သိပြည်သူများ၏ သတင်းပေးချက်အရ ဗန်းမော်ခရိုင် မန်ဝိန်းကျေးရွာတွင် ကချင်လူငယ် လူရွယ်များ၊ ကျောင်းသားများအား ဘိန်းဖြူနှင့် မူယစ်ဆေးဝါးများကို အဓိကရောင်းချပေးသောသူကို ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ဖမ်းဆီးထားသော ဘိန်းရောင်းချသူအား ကေအိုင်အိုအစိုးရမှ စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုများ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။
at 9/24/2013 10:08:00 AM No comments:
Wunpawng Mungdan kata Jinghpaw Jawngma ni hte Jinghpaw Ramma ni hpe madung dat nna langhpam lusha dut jaw na matu lit shatsam da hkrum ai myen hpyen la (1) hpe Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya KIA Dap Ba (3) npu, Dung (27) na Myu Tsaw Share Ninghkring ni lu rim la lai wa sai lam shiga na chye lu ai. Wunpawng Mungdan Shanglawt AsuyaaKa-ni, Nanghpam "Pat Jasan" lamang hte maren ya na zawn shamu shamawt hkawm mat wa ai shaloi Manmaw Ginwang, Man Wing Mare kaw ya na zawn myen hpyen ni lit la dut shangun ai masha hpe lu rim la ai re lam hpe matut chye lu ai. Lu rim la ai bawng hpe ya du hkra naw sharen da nna san jep ai lam ni galaw nga ai lam hpe na chye lu ai.
at 9/24/2013 10:06:00 AM No comments:
at 9/24/2013 10:05:00 AM No comments:
အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲတွင် သမ္မတ၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်များ ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ထိုးပြီး ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း များကိုပါ အသိသက်သေအဖြစ် ဖိတ်ကြားမည်ဟုဆို
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲတွင် သမ္မတ၊ ဒုတိယ သမ္မတများနှင့် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်တို့ ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုး သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းနှင့် အမေရိကန် သမ္မတဟောင်းများကိုပါ လေ့လာသူအဖြစ် ဖိတ်ကြားသွားမည်ဟု သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကားပြီး သျှမ်းသံတော်ဆင့် မီဒီယာ အယ်ဒီတာချုပ် ဦးခွန်စိုင်းက ပြောကြားသည်။
at 9/24/2013 08:43:00 AM No comments:
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya, Sam Mung daju KIA Dap Ba (4) ginra rai nga ai Huhpyet maga hku nna amya yu wa ai myen hpyen asuyaahk-l-y (158) hpung ni hpe Namhpaka Bangkai Banghka hka hkaraw na Ja Maw makau kaw September (21) ya jahpawt hkying (9:00 AM) ten ram hta KIA Mung Shawa Hpyen Hpung (MHH) na Share Ninghkring (2) gaw bawm majan hte hkap gasat lai wa sai lam shiga na chye lu ai. Ndai zaw MHH na share ninghkring ni bawm majan hte hkap gasat ai hta myen maga na marai (10) si hkrum nna, marai (6) hkala hkrum lai wa sai lam hpe mung matut na chye lu ai.
at 9/23/2013 08:53:00 PM No comments:
at 9/23/2013 09:30:00 AM No comments:
အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ပြုလုပ်ရာတွင် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များ ထည့်သွင်းရန် အရေးကြီးပြီး ကချင်မပါဘဲနှင့် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ပြုလုပ်မည် ဆိုပါက အဓိပ္ပာယ် မရှိဟုဆို
အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် များအကြား အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ပြုလုပ်ရာတွင် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များ ထည့်သွင်းရန် အရေးကြီးပြီး ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (ကေအိုင်အို) မပါဘဲနှင့် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ပြုလုပ်မည်ဆိုပါက အဓိပ္ပာယ်မရှိဟု တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ ချင်းအမျိုးသား တပ်ဦး(CNF) ၏ အဓိပတိ ကောင်စီဝင် ဒေါက်တာ ဆလိုင်းလျန်မုန်းက ပြောကြားသည်။
at 9/23/2013 09:02:00 AM No comments:
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Sam Mungdaw KIA Dap Ba (4) up hkang ginra npu, Dung (36) niaginra Mungbaw Namhkyek wa lam na hkau na pa hta September (21) ya jahpawt daw gap gasat lai wa sai lam shiga na chye lu ai. KIA Dung (36) kata na Mungshawa Hpyen Hpung (MHH), Mung Shawa Kanawn Mazaum Hpung (MKM) ni pawng marai (6) hte myen tai hpyen hpung hk-l-y (241) hkrum katut gap gasat lai wa ai re lam na chye lu ai. Ndai zawn gap gasat ai hta myen hpyen ni maga na marai (3) si hkrum wa nna, (2) hkala hkrum wa sai lam, tinang Myu Tsaw Share Shagan ni maga gaw hpa hkala ai lam nnga ai hpe mung na chye lu ai.
at 9/22/2013 05:52:00 PM No comments:
at 9/22/2013 11:24:00 AM No comments: